Ireo toetra mahasoa | Tantsaha anaty aterneto | December 2019
Sokajy Ireo toetra mahasoa
Brezila - inona no ilaina?
Bertoletija dia karazana zavamaniry iray monotype, izay zaraina indrindra any Amerika Atsimo. Ny karazana ity karazan-kazo ity dia ilay takelaka avo, izay fantatra amin'ny tontolo erantany amin'ny anarana hoe "Nut nut". Ny voankazo amin'io zavamaniry io dia tena lehibe lavitra noho ny voany. Na dia tsy ampy tsara aza ny miantso an'io vokatra io, satria ny zavamaniry dia antsoina hoe voa.
Mahasoa ny pistasy
Tena misy ny hazon'aina. Tsy fantatry ny mpanoratra sy ny mpanakanto izany, fa tsy sary miaina mifanaraka amin'ny soratra ara-baiboly, fa pistazien malaza. Efa an'arivony taona izao ireo zavamaniry tropikaly ireo no namolavola ny olombelona tamin'ny voankazo sarobidy, izay mampifangaro tsara ny fanandramana tsara sy ny toetra mahasoa.
Inona no atao hoe voanjo Brezil ary mahasoa ho an'ny vehivavy?
Angamba maro amintsika no mahazatra ireo voanjo Breziliana - hita any amin'ny toerana rehetra ity vokatra sakafo ity, satria efa nahazatra ny fampiasana azy any amin'ny faritra rehetra mahazatra. Azo ampiasaina irery izany na mety ho famenoana tanteraka ny karazan-tsakafo sy mamy rehetra. Na dia izany aza, tsy dia maro ny olona mahafantatra fa, ankoatra ireo singa manan-danja amin'ny fanandraman'ny tsiro, ity vozony ity dia manana volabe vonton-kevitra ilaina ho an'ny vatan'ny vehivavy.
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Ireo toetra mahasoa